Umlingisi ogqwesileyo we-Anti-static PP Spunbond nonwoven yoMvelisi kunye neFektri | Henghua
Xa kuthelekiswa namalaphu ephothiweyo, amalaphu angalukwanga ngokubanzi anezantsi ukufuma kwakhona kwaye bathambekele kumbane ongagungqiyo ngexesha lokuvelisa kunye nokusetyenziswa.
Iimpawu zentlantsi ezenziwe ngumbane ongashukumiyo zinokubangela ukuqhuma kwezinto ezithile ezinokutsha. Iintlantsi kunye nombane ongashukumiyo ziya kwenzeka xa unxibe inayiloni okanye iimpahla zoboya kwimozulu eyomileyo. Oku akunabungozi emzimbeni womntu. Nangona kunjalo, kwitafile yokusebenza, iintlantsi zombane zinokubangela ukuqhuma kwe-anesthetic kwaye kwenzakalise oogqirha kunye nezigulana.
Ukuze ukusombulula le ngxaki kunye nokwenza amalaphu non-ephothiweyo ukuba isetyenziswe ngokubanzi emarikeni, Henghua nonwoven unikezelo umthengi jikelele amalaphu antistatic non-ephothiweyo, ukuze amalaphu non-ephothiweyo ukufumana Isiphumo antistatic Zintle, ukunciphisa umonakalo obangelwa static La malaphu akhusela izinto zombane kunye nezixhobo zombane kwimililo kunye nogqabhuko-dubulo.
Amalaphu ethu okulwa-static asetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo ezishushu ezifana nezityalo zamandla egesi, iivenkile zokunyibilika kwentsimbi kunye neeyunithi zokwenza iiglasi. Izambatho zikwasetyenziswa ngabantu ukuba zikhangeleke zinomtsalane kwaye zikhusela umzimba nakwimozulu.
Ngophuhliso oluqhubekayo lobuchwephesha bemveliso engalukanga, ngokuthe ngcembe kuye kwaba sisizukulwana esitsha sezinto ezinokusingqongileyo, ezinobungqina bomswakama, eziphefumlayo, eziguquguqukayo, ezikhanyayo, ezingatshiyo, ezilula ukubola, ezingenatyhefu nezingacaphukisiyo. , zizityebi ngemibala, ixabiso eliphantsi, kwaye zinokuphinda zisebenze nezinye iimpawu, zisetyenziswa kwezonyango, kumalaphu asekhaya, kwimpahla, kwimizi-mveliso, kwezomkhosi nakwezinye iinkalo.
Amalaphu wethu a-anti-static nonwoven angasetyenziselwa ukukhusela izixhobo ezibuthathaka ze-Electrostatic, ukuvaleka kwekhompyuter, izigqubuthelo zefloppy, izigqubuthelo zecomputer, ukuhanjiswa kokutya ngokubanzi kwezonyango kunye nezicelo zokucoca igumbi.
Ukuba unomdla okanye ufuna ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu, nceda ucofe imibuzo!
Okulandelayo yintengiso eshushu ye-spc: Ilaphu le-anti-static nonwoven / Umbala: Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka / Ubunzima: 55gsm / Ububanzi: 1.6m / Ubude: 300m / roll / Usetyenziso oluphambili: ingubo yokhuseleko
Egqithileyo Uphawu Anti-UV PP Spunbond nonwoven
Okulandelayo: Umntu olwa ne-bacterial PP Spunbond Nonwoven
Kk Non womluki Ilaphu, Non womluki Ilaphu, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Ixabiso loLuhlu lweLaphu, Izinto ezingalukanga, Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo,